अमेरिकाको अवस्था झन खराब बन्दै, विश्वविद्यालयहरु खोल्ने योजना स्थगित गरियो – Sandesh Munch
July 7, 2020 157
एजेन्सी, २३ असार । अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको घटना लगातार तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाका शीर्ष महामारी रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फौचीले भने, ‘अवस्था बिग्रँदै गइरहेको छ।’
अमेरिकाका धेरै राज्यहरूले लकडाउन खोल्ने विचारलाई त्याग्न थालिसकेका छन् । यस सूचीमा ताजा नाम फ्लोरिडाको ग्रेटर मियामी क्षेत्रको जोडिएको छ। सोमबार, जिम बन्द गर्ने निर्णयसंगै त्यहाँका रेस्टुरेन्टमा भित्री भोजनको व्यवस्था पनि बन्द हुने भएको छ ।
Prevबंगलादेशको एक निजी अस्पतालद्वारा हजारौं नागरिकलाई कोरोनाको नक्कली प्रमाणपत्र वितरण
Nextउपत्यकामा कोरोना जोखिम बढ्दै
बर्खरै प्राप्त समाचार ! एकदिनमा थपिए १७० संक्रमित
२४ घण्टामा १२ कोरोना संक्रमितको मृ त्यु, मृ तकको संख्या २५१ पुग्यो